Mangahazo Info. About. What's This?
Tsy mety amin’ny fambolena voanjo ny haavo mahery ny 1500m Tany misolampy tsy mihoatra ny 12%. Tany maivana, mamasipasika, tsy mifatratra ary tsy mitana hamandoana be loatra baiboho. Fanao amin’ny tany vao novakiana Azo atao manaraka ny voly mamoa legiominosy.
Ny vomanga na bageda dia zavamaniry mandady. Avy any amin’ ny faritra manana toetanim-pehin-tany any Amerika ny vomanga. Eny amin’ ny tany fasehina no ambolena azy any amin’ ny faritra mafana eto amin’ izao tontolo izao. Ny mba hahazoana fakany mibontsina izay atao hoe vodiny no antony ambolena azy indrindra. Azo hanina koa ny raviny. Misy roa karazana ny vomanga famboly, dia ilay karazana mafimafy somary maina sy ilay karazana malemy somary mandranoka miloko mavo. Misy karazana vomanga iray tsy fihinana fa ambolena ampadadina hatao haingon-trano na haingon-tanàna Ipomoea pandurata. Ny vom ...
Ny ovy dia zavamaniry misy vodiny azo hanina sady be tavolo, mitovitovy endrika amin’ ny vomanga. Antsoina ihany koa hoe ovimbazaha ity zavamaniry ity. Solanum tuberosum ny anarany ara-tsiansa. Ny vodin’ ny ovy dia isan’ny foto-tsakafon’ ny ankamaroan’ ny mponina amin’ ny faritra manana toetany antonony. Zavamaniry afaka velona mandritra ny taona ny ovy. Ny tahony, izay mety mahatratra iray metatra, dia afaka mitsangana na mandady. Maranitra ny raviny ary miloko fotsy na volomparasy na anelanelan’ izany ny voniny. Afaka mamoa misy vihiny maro ny ovy. Ny tahony sy ny raviny ary ny vodiny di ...
Ny mangahazo na kazaha na kajaha na balahazo na mahôgo dia zavamaniry amin’ ny faritra mafana, avy any Amerika. Toy ny hazo kely maniry ny mangahazo ka mety mahatratra 240 sm ny haavony miala amin’ ny tany. Miloko mavo manopy maitso ny voniny. Ny halavan’ ny fakany, izay fihinana.
1. Fiavian’ ny mangahazo sy karazany
Fiavian’ ny mangahazo
Ny mangahazo dia zavamaniry avy any amin’ ny faritra manana toetanin-jana-pehin-tany any Amerika, any Venezoela. Nentin’ ny Pôrtogey taty Afrika ny mangahazo ka avy ao izy no niely manerana ny faritra manana toetanin-jana-pehin-tany rehetra sady nihanitombo ny karazany. Niely manerana ny firenena manana toetanin-jana-pehin-tany mando na toetanim-pehiben-tany ny mangahazo taty oriana.
Misy karazany 160 any ho any ny mangahazo any Amerika. Ny roa amin’ izany ihany no azo atao sakafo, dia ny mangahazo mangidy Manihot esculenta na Manihot utilissima izay ampiasaina indrindra amin’ ny fanamboarana koba-mangahazo tapiôka, sy ny mangahazo mamy Manihot dulcis na Manihot opi izay atao sakafo toy ny legioma.
2.1. Fambolena sy fampiasana ny mangahazo Fambolena mangahazo
Tsotra ny fambolena mangahazo: atsatoka amin’ ny tany ny tahony ary avaina ny ahitra manodina azy. Ny fangadiana ny fakany ny vodiny dia azo atao enim-bolana aty aoriana. Maniry amin’ ny tany lemaka misy nofon-tanin’ antsanga ny mangahazo. Afaka maniry hatrany amin’ ny haambo 1 000 m izy nefa mihena noho izany ny vokatra azo. Ny firenena mpamokatra mangahazo be indrindra maneran-tany dia i Brezila, i Nizeria, i Tailandy, ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô ary i Indônezia.
2.2. Fambolena sy fampiasana ny mangahazo Fampiasana ny mangahazo
Ny fakan’ ny mangahazo izay miendrika varingarina dia fihinan’ ny Indianan’ i Amerika tany aloha. Azo atao sakafo koa ny raviny, indrindra rehefa voatoto ilay antsoin’ ny Malagasy hoe ravitoto.
3. Toetoetran’ ny mangahazo
Mety mahatratra 240 sm ny haavon’ ny mangahazo miala amin’ ny tany. Ny halavan’ ny fakany dia mety mahatratra 91 sm ary ny sakan’ izany dia mety mahatratra 8 sm. Ny mangahazo dia misy poizina asidra atao hoe manihôtôksinina izay manjavona rehefa tratran’ ny hafanana mandritra ny fandrahoana azy. Ny tenan’ ny mangahazo mangidy manontolo no ahitana io poizina io, fa ny hoditry ny mangahazo mamy ihany no misy izany.
Ny mangahazo mangidy Manihot utilissima na Manihot esculenta dia zavamaniry misy ravina mitapelaka, misy voniny miloko mavo manopy maitso. Ny fakan’ ny mangahazo dia sakafo tsy dia tsara satria be rano tsy ampy prôtida sy lipida ary otrikaina vitaminina. Be mpitady anefa ny mangahazo satria ny 30 %n’ ny lanjany dia tavolo.
mampiasa zezika simika dia 5 Ny entana faharoa lafo vidy indrindra dia mangahazo Ny zava - bolena lehibe indrindra amin ny lafin ny velarantany dia vary
mampiasa zezika simika dia 50 - 75 Ny entana faharoa lafo vidy indrindra dia mangahazo Ny zava - bolena lehibe indrindra amin ny lafin ny velarantany dia vary
ny kaodin - distrika dia 104 Ny entana faharoa lafo vidy indrindra dia mangahazo Ny zava - bolena lehibe indrindra amin ny lafin ny velarantany dia vary
mampiasa zezika simika dia 75 Ny entana faharoa lafo vidy indrindra dia mangahazo Ny zava - bolena lehibe indrindra amin ny lafin ny velarantany dia vary
ny kaodin - distrika dia 314 Ny entana faharoa lafo vidy indrindra dia mangahazo Ny zava - bolena lehibe indrindra amin ny lafin ny velarantany dia vary
lafin ny velarantany dia vary. Ny entana fahatelo lafo vidy indrindra dia mangahazo Ny isan omby dia 4220. Ny isan ny taona nisiam - pesitry ny vorona teo
ny kaodin - distrika dia 107 Ny entana faharoa lafo vidy indrindra dia mangahazo Ny zava - bolena lehibe indrindra amin ny lafin ny velarantany dia vary
mampiasa zezika simika dia 25 - 50 Ny entana faharoa lafo vidy indrindra dia mangahazo Ny zava - bolena lehibe indrindra amin ny lafin ny velarantany dia vary
mavokely sy mavo dia betsaka karôtenina. Any Etazonia sy any Azia dia atao sakafom - biby ny vomanga notsiratsirahina sy nohamainina. Mangahazo Ovy Saonjo